eNasha.com - सिनेमाको अर्को किनारा
सिनेमाको अर्को किनारा
पन्ध्र वर्ष भएछ, 'फिल्म'का बारेमा चासो राख्न थालेको ! म सिनेमा खूप रुचाउँछु, यसको हरेक पक्ष मन पराउँछु । जहाँसम्म एउटा साधारण दर्शकको नजरको कुरा छ, मलाई नेपालले उत्पादन गरेको वा शुरु गरेको कुनै पनि सिने विधा थाहा छैन । भारतको नक्कलमा नेपाली सिनेमा बन्न थालेको हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन । भारतीय चलचित्रले नेपालीलाई सिनेमाको लत लगायो, चलचित्र हेर्न रुचि जगायो, त्यसलाई प्रेम गर्न सिकायो । त्यसैले बिना कुनै मिहिनेत हामीले हिन्दी बोल्न र लेख्न सिक्यौँ । म नेपाली चलचित्र बिरलै हेर्छु । पछि बुझ्दै आउँदा मलाई घोत्लिन मन लाग्यो, साँची म नेपाली भएर नेपाली सिनेमा किन बिरलै हेर्छु हँ ?
यसको सीधा उत्तर छ । म जस्ताको त्यस्तै नक्कल उतारिएका नेपाली चलचित्र हेरेर म ती निर्देशकको खिल्ली उडाउँछु । अमिल्दा चरित्रको उठान र बिनाकारण तिनको पतन देखेर म तिनलाई गिज्याउँछु । अनि, पत्तै नपाई गरिएका तकनिकी प्रयोगले दिने नकारात्मक प्रभावलाई म कसरी सहन सक्छु ?
सन् २००४ को अगस्ट ५ मा मैले इन्स्टिच्यूट अफ टेलिभिजन, फिल्म्स् एण्ड द पर्फमङ आर्ट्समा मैले निर्माण र निर्देशन विषयमा पढ्न शुरु गरेँ । यहाँ मैले चलचित्र निर्माणका आधारबारे सिकेँ । मैले यहाँ जानेँ, सिनेमा निर्माण भनेको लगानी (फाइनान्सिङ), पूर्व-निर्माण (प्रि-प्रडक्शन), निर्माण (प्रडक्शन), निर्माणपछि (पोष्ट-प्रडक्शन), व्यापार (मार्केटिङ) तथा त्यसको विश्लेषण (रिभ्यू) गाँसिएको हुन्छ । बजारको तरिकाबद्ध अध्ययनले चलचित्रको व्यापारलाई अझ बढी राम्रो बनाउन सक्छ भन्नेसमेत मैले थाहा पाएँ ।
सिनेमाको अर्को सत्य
अहिले सिनेमामा अर्को सत्य बिस्तारै विस्तृत हुँदै आएको छ । त्यो सत्य डिजिटल सिनेमा हो । हलिउडले डिजिटल श्रव्य र दृश्यलाई निकै लोभलाग्दो गरी निर्माण गर्दै आइरहेको छ । भारतमा पनि यो निकै सफल तरिकाले प्रयोग गरिँदै आएको छ । तर सँगसँगै के छ भने हलिउड र बलिउडको बजेट आकासिँदै जान थालेको छ । नाम, काम र दामका लागि मनोरञ्जन उद्योगमा काम गर्न हत्ते गर्नेहरुको संख्या दिनदिनै बढ्दो छ । मनोरञ्जनको व्यापार विश्वकै सबैभन्दा कमाउने धन्दामध्ये गनिन थालिएको छ । तर जब हामी आफ्नो देशमा यो आँकडा सुन्छौँ, पढ्छौँ- घुटुघुटु थुक निल्न बाध्य हुन्छौँ । कारण खोतल्दै जाँदा एउटै मात्र कारण पाउन सक्छौँ- हामीले नयाँ कुरालाई कहिल्यै प्रयोग गरेनौँ, नयाँ कुरालाई प्रोत्साहन कहिल्यै गरेनौँ ।
अब समय आइसकेको छ कि हामीले संसारले रुचाउने कथानक सोच, डिजिटल सिनेमा अनि प्रशिक्षित कलाकारका बारेमा सोच्न थाल्नु पर्छ । त्यसो भए संसारले रुचाउने कथानक सोच कस्तो हो त ? कथानक जुन संसारका मान्छेले भाषा, चरित्र, शिक्षा, स्तर आदि फरक भए पनि बुझ्न सक्नेलाई संसारले रुचाउने कथानक भनिएको हो । त्यस्तै सुहाउँदिला पात्र पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हो ।
डिजिटल सिनेमाले अहिले संसार हल्लाएको छ । विस्तारै कतिपय निर्माताहरु फिल्मबाट डिजिटलमा लस्किसकेका छन् । अब ठूल्ठूला स्पूलभन्दा हार्डडिस्क, डीभीडी तथा सर्वर कामलाग्ने वस्तुमा परिणत भइरहेका छन् । डिजिटलमा सिनेमा खिच्नु सजिलो मात्र नभई डिजिटल्ली सुरक्षा गरिन्छ । यसले श्रव्य तथा दृश्यमा उच्चस्तरीय प्रदर्शन क्षमता राख्दछ । जसमा 'जेनेरेशन लस' कुनै चिन्ता छैन, कम समय खर्च हुने गरेको छ ।
नेपाली सिने उद्योग
सामान्यतया वार्षिक रुपमा नेपालमा १५ देखि ३० सिनेमा निर्माण हुने गरेका छन् । नेपालमा माओवादी समस्या समाधानतिर लाग्दै गर्दा यसको संख्या थोरै बढेको होला । नेपाली सिनेमा प्रायः १६ मिलिमिटरका क्यामेराले खिच्ने गरिन्छ । यी चलचित्रलाई टेलिसिने गरेर डिजिटल विधामा सम्पादन गरिन्छन् । यस्ता चलचित्रलाई ३५ मि.मि.मा ब्लोअप गरेर प्रिन्ट बनाई प्रदर्शन गरिन्छन् । यसरी बनेका चलचित्रले दिने दृश्य तथा ध्वनि यति कमसल छन् कि तिनले हलिउड र बलिउडमा बनेका सिनेमालाई टक्कर दिन निकै गाह्रो छ । यस्तो स्थितिमा नेपाली चलचित्र उद्योगको अवस्था विश्व मानचित्रमा कहाँ छ त ? दुःखको कुरा कहीँ छैन ।
नेपाली चलचित्रको भोलिको भविष्य भनेको डिजिटल सिनेमा नै हो । पश्चिमी देशमा यो त शुरु भइसकेको छ । हलिउड डिजिटल हाइवेमा दौडिन शुरु गरिसकेको छ । ढिलोचाँडो बलिउडले पनि त्यही बाटो अँगिकार गर्नेछ । के उसो भए हामीले कहिल्यै डिजिटल सपना देखेको छ ? मलाई थाहा छ, अबका केही वर्षभित्रमा नेपाली चलचित्र उद्योगले गम्भीर संकटको सामना गर्नुपर्नेछ । जसमा लगानी नै मुख्य हुनेछ ।
अहिलेकै नेपाली चलचित्रको स्तरमा नेपाली डिजिटल सिनेमा निर्माण गर्नु ज्यादै सस्तो हुनेछ । त्यसैले अहिले नै किन यसलाई नअँगाल्ने ! स्तरीय चलचित्र निर्माण गर्न अन्तर्ररा्ष्ट्रिय समन्वय खोज्ने, अन्तर्ररा्ष्ट्रिय बजेट र बजार खोज्ने काम त अझै बाँकी नै छ ।
- सुदीप श्रेष्ठ
प्रविधि सोच रोचक क्या बात ! कन्ट्रोभर्सी फिल्म फेस्टिबल अभिनेत्री निर्देशक घोषणा ग्ल्यामर नवीनता पेज3अभिनेता पार्टी कार्यक्रम रोमान्स सेक्स सञ्चारकर्मी